ထိရောက်သောလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု | Mycanvas
ငယ်ရွယ်သောစီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဟာ အလုပ်အတွေ့အကြုံအလုံအလောက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်အချိန်များစွာကုန်တတ်ပါတယ်။ အချို့သောသူတွေဟာအလုပ်လုပ်တာနှေးပြီး အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်ကြာတတ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ Supervisor တွေနဲ့ စီနီယာတွေရဲ့ ဆူပူခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။ သင်အလုပ်များများလုပ်လေ အလုပ်မြန်မြန်ပြီးလေဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင်ဟာ အခြားစီးပွားရေးသမားများထက်သာလွန်လိုပါက အရည်အသွေးမြင့်မားသောရလဒ်များကို သူတို့ထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရရှိရန်အရေးကြီးပါတယ်။
ထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတွေဟာ ဘယ်လိုစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမဆိုအသုံးများပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး သင်ဟာ သင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
[To-do list ပြုလုပ်ပါ]
လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းမှာ “To-do List” လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် To-do list ကို ဘယ်လိုလုပ်လေ့ရှိသလဲ? ဘယ်လိုစံသတ်မှတ်ချက်တွေထားပြီးစဉ်းစားသလဲ?
To-do List လုပ်တယ်ဆိုတာက သင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ချရေးရုံမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဟာကိုအရင်ဦးစားပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တိုင်းကို “urgency” နဲ့ “importance” ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေအကဲ့ဖြတ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအကဲဖြတ်ထားခြင်းဖြင့် သင်နောက်တစ်ဆင့်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာပိုပြီးလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းအကဲဖြတ်မှုအရ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် (Deadline) ကို သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ Deadline သတ်မှတ်ထားခြင်းဟာ အလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေဖို့ကိုအာရုံစိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ပထမဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို အမြန်ပြီးမြောက်စေပါတယ်။
Deadline သတ်မှတ်ပြီးနောက် နေ့စဉ်အချိန်ဇယားရေးဆွဲရာမှာ သင်စဉ်းစားစရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့ အချိန်အပိုတစ်ခုပြင်ဆင်ထားခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီကြာချိန်ဟာ သင့်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင်ဟာအလုပ်တွေပြီးအောင်လုပ်ဖို့ လောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒုတိယအနေနဲ့ တစ်နေ့တာအတွင်း သင်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုပါတယ်။ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ဘယ်လိုအချိန်မှာသင်အာရုံအစူးစိုက်နိုင်ဆုံးလို့ သင်ထင်ပါသလဲ? သေချာတာကတော့မနက်ပိုင်းအချိန်တွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် အာရုံစူးစိုက်ဖို့လိုတဲ့အလုပ်တွေကိုမနက်ပိုင်းမှာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
နေ့တစ်‌နေ့ရဲ့အဆုံးမှာ သင်ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အလုပ်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ သင့်အနေနဲ့ တိုးတက်မှုနည်းစနစ်များကိုလိုက်နာခြင်း၊ သင်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ သင့်အထက်က Supervisors တွေ စီနီယာတွေထံက အကြံပေးချက်တွေ Feedback တွေကိုလည်းရယူသင့်ပါတယ်။
Reference: How to Manage Tasks Effectively? 10 Tips for Effective Task Management
(nTask manager blog, Website Link: https://www.ntaskmanager.com/blog/task-management-skills/ )